Katz amin'ny alika: Jon Katz : Lisitra ho an'ny alika prespective tompon'ny
Last nohavaozina: Sep. 17 2019 | 7 min namaky
* Mahazo ny alika tianao.
Ny fanararaotana ny biby amin'ny ankapobeny, sy ny alika indrindra, Nitarika tompon'ny maro ny faharesen-dahatra fa ny hany safidy ara-pitondrantena dia ny hamonjy ny alika avy amin'ny antsasa-kilao, izay miatrika euthanasia. Mety ho traikefa tsara mba hamonjena ny alika (namonjy ny sisin-tany dia eo ambany collie Orson ambany ny latabany), fa, toy ny alika fananana mihitsy, fa tsy ho an'ny rehetra. Mety ho traikefa mahafinaritra ny mahita alika lehibe avy amin'ny tsara mpiompy. Manana ny roa lahy tamin'izay, koa: dia ondry aman'osy sy omby iray nihazakazaka ny toeram-pambolena, ary ny vaovao, Clem, suffuses ny fiainana an-trano sy ny mamy ho namana. Mitsiky aho efa ho isaky ny mijery azy. Tsy misy afaka mibaiko ny karazana alika ianareo tokony mba, Azo antoka fa tsy I. Tsy maintsy hikarakara azy, ka mahita olona fa mety ianao ho tia.
Fa ataovy ny asa takiana. Na dia eo aza Mila fiomanana, dia mbola zavatra iray crapshoot. Alika nividy teo an fivarotana biby azo inoana fa avy Puppy bary avo-boky asa fiompiana izay miteraka sy perpetuates inbreeding fahasalamana sy ny toetra olana. Araka ny fanadihadiana ny tonian-dahatsoratra voalaza James sy ny mpiara-miasa aminy Serpell J. A. Jagoe ao amin'ny The Domestic Dog, alika azo avy amin'ny toeram-pivarotana biby no tena mba hanehoana ara-tsosialy sy ny fahefana-tahotra karazana herisetra noho ny alika avy mpiompy na fialofana. Maro ny famonjena sy ny fialofana alika manana fihetsika olana, amin'ny alalan'ny tsy fidiny ny. Efa tsara herisetra, nikorontan-tsaina, na imbetsaka indray homed, ho amin'ny fahafantarana fa ny, araka ny University of Pennsylvania Sekoly Medicine fitsaboina momba ny biby, ry zareo be kokoa manana olana toy ny compulsive fitsakoana, herisetra, mivovò, fihinanana, ary inona no antso olombelona “fisarahana fanahiana,” noho ny purebreds avy amin'ny kalitao mpiompy.
Tompon'andraikitra vondrona famonjena sy fialofana mpiasa tsy manaiky izany, fa ho azo antoka adopters hahatakatra izany, mba ny alika tsy bounce miverina na, ratsy, mijaly fitondrana ratsy na handratra ny hafa. Nifanena tamin'ny aho fa misy mpamonjy voina suffused ny filan'ny nofo sy nanolo-tena ho sahirana loatra alika izay dodona ny hampandroso herisetra na tahotra alika ho mahazatra trano. Ary na dia avy amin'ny feon'ny fieritreretany mpiompy alika dia miendrika 'ny reniny sy ny iray tam-po, ka ny sasany dia simba, mahatahotra, ary cowering, raha ny hafa hianatra ny hahatsapa soa aman-tsara sy mahatoky isika. Be dia be ny maty eritreritra na tia faobe-mamokatra mpiompy alika ny tarehy na ny antony ara-barotra, tsy momba ny fahasalamana na ny toetra tantara. Koa satria ny alika rehetra izao dia efa ho tanteraka unmonitored sy unregulated amin'ny sahiran-tsaina, underfunded eo an-toerana ny fitondram-panjakana, ny olona izay te alika tena samirery. Izany no mahatonga izany hevitra tsara ny manontany ny mpiompy sy ny asa famonjena ny andinin-tsoratra masina vondrona, mba hahafahanao mahita ny fomba hafa ny alika efa niasa avy.
Tsy dicey mba alika fisafidianana ny fitondran-tena na ara-politika fihetsika. Aoka ho fantatrareo fa raha misafidy ny fanavotana alika, izy mila faharetana sy ny fahaiza-manao manokana. Alika indrindra azo fiofanana na retrained, na dia ao amin'ny vanim-potoana lehibe, fa raha vonona ianao na tsy afaka manao ny fanoloran-tena tsy miovaova ny fotoana sy ny asa, hafa karazana alika ianao dia mety hifanaraka tsara kokoa. Fahazoana ny purebred alika rehefa misy mahantra maro ao amin'ny fialofana alika mbola, an-tsaiko, manan-kery tanteraka ny safidy, ary indraindray ny iray tsara kokoa.
* Impulsiveness dia maizina ianao, rehefa nitondra ny alika ao an-trano.
Ataovy miadana. Aza manapa-kevitra eo amin'ny alika noho ny nahitanareo tiany ianao iray amin'ny fahitalavitra, na nandeha teny an-dalana. Na ny gaga ny ankizy, na ny ray aman-dreny foana tsy mitondra fanatitra akany, na noho ny nandre ny amin'ny karazan-dia marani-tsaina. Sisin-tany collies tena mahay, fa manao zavatra tsy hay lazaina adala, Toy ny hoe omby fako kamiao. Ny alika manan-tsaina Tsy voatery ho biby lehibe, ihany. Aho tsy amused na filozofika, raha ny fomba Orson-kevitra ny hanokatra ny vata fampangatsiahana sy hanala akoho iray manontolo.
* Hampidina ny fanantenanao.
Ny pups frolicking teny amin'ny bozaka ao amin'ny dokam-barotra sakafo alika-tsara tarehy, fa mifanohitra ireo dia mahazo ny tena alika. Real Puppies manana loza mandritra ny fanofanana housebreaking, fahadisoana karipetra ny bozaka, mitsako zavatra sarobidy. Tena alika horonan-taratasy, ary avy eo serfa scat mitsambikina teo amin'ny farafara. Mila tifitra sy ny fanafody; ireo marary.
Tena mety tsy hahazo alika be ny fahafahana voafatotra miaraka aminao amin 'ny alalan' ny valan-javaboary. Satria be dia be toy izao ny alika ratsy fiofanana, manao tsy tia alika hatrany aina. Polisy manerana ny firenena manoratra tapakila ho an'ny olona izay mandeha alika unleashed. Dog tompony atao Enjehana Fa ny biby fiompy’ ny kaikitry ny, na dia ny fitondran-tena menacing. Hatrany hatrany ireo orinasa fiantohana Nojereny izay karazany ny alika ianareo, ary hanafoana ny politika raha toa ka tsy mankasitraka. Misy vondrona zon'ny biby-alika mino dia tokony homena ara-dalàna lehibe kokoa sata, Saika mitovy amin'ny olombelona '. Misy ny tsy mino ny olona tokony havela “manokana” ny alika mihitsy. Fa ny hendry teoria ny Dog Fampiofanana manantitrantitra ny andraikitry ny tompony.
* Ary ireo andraikitra ireo dia afaka toa unremitting.
Ny alika tokony hiala na dia ny fandrarahana rano sy ny hatsiaka. Mila fiheverana izy ireo, fitiavana, rehefa tairina, ary ny fanatanjahan-tena, na dia rehefa reraka ianao, be asa, na tsy tao amin'ny toe-po. Ny zavatra ilainy tsy abate rehefa te faran'ny herinandro eny na raha tara mijanona ao amin'ny birao.
Nampahafantatra alika tia manantena ireo olana ireo sy ny lalany izy ireo ny fanaovana vazivazy sy ny faharetana. Ho setriny, izy ireo mahazo be fitiavana, mahafinaritra, ary ny namana. Misy fifandirana sy ny valisoa eo amin'ny fifandraisana rehetra, olombelona na ny canine. Mino aho naka fomba fijery lava be rehefa alika. Tokony hahita ny any ankoatry ny fotoana, indrindra fa raha ianao no teo amin'ny tany amin'ny telo A.M. dabbing amin'ny karipetra amin'ny Nature 's Fahagagana, miezaka ny hanesorana ny hanitry. Fomba fijery ny ela ihany no tonga amin'ny fahatakarana ny toetry ny biby ireo, ary manaiky fa na dia amin'ny ezaka lehibe dia tsy ny antsika foana amin'ny harato.
* Mitandrema ianareo, fandrao ny fanararaotana fialan-tsiny.
Folo taona lasa fotsiny, alika mbola “nolaniana,” tsy “voavonjy,” pihetseham-po kokoa voampanga hevitra. More alika tompon'ny noho Mahisa izao hampiditra mamaritra ny alika na ny andian-teny: “Angamba izy herisetra foana izy.”Rehefa manontany ny fomba mahalala, ny porofo matetika no zavatra miseho, amin'ny tsara indrindra.
Mitandrina, raha te ho afa-ny alika amin'ny fampijaliana no tena antony iray tianao. Misy fomba maro mba hanehoana ny maha-olona sy ny fiaraha-miory, ny olona na ny biby, fa ity no nampihetsi-po manokana biby ao an-trano. Raha ny tanjona misread ny diso na manao vinavina tsotsotra, samy ianareo dia miatrika ny voka-dratsin'ny nandritra ny taona maro.
Steven R. Lindsay, ny seminal-boky roa Boky Torolalana ny Applied Dog Behavior sy fampiofanana, explores vinavina tsotsotra natao momba ny fanararaotana eo amin'ny fahazoana ny alika. Tahotra ny olombelona sy ny fisorohana fifandraisana fihetsika indraindray zohina ny fampijaliana teo aloha, Lindsay Miaiky. Fa fialofana haingana ny mpiasa no mangataka fa fanazavana rehefa miresaka amin'ny tendrena ho adopters, tsy mahalala raha marina izany. “Isalasalana fa, pihetseham-po ara-batana sy herisetra mitranga ary mety ho manan-danja mahatonga ny tahotra,” Lindsay manoratra. “Na izany aza, izany angamba no mitranga matetika lavitra noho ny iray tsy mety manantena avy amin'ny matetika ny tatitra toy izany.”
Satria ny alika aza tsy afaka manitsy antsika, na mitaraina ny ray aman-dreniny, fa tsotra ny mihevitra fa ry zareo niharan'ny habibiana olombelona, hevitra fa matetika koa mifanaraka manokana sy ny fihetseham-pon'ny tantara. Fa ny fototarazo, inbreeding, ary ny toe-javatra ao amin'ny fako, amin'ny lafin-javatra hafa, miantraika lalina koa ny alika. Ankamaroan'ny fotoana, isika dia tsy mahalala ny zava-misy tena fa tsy mety mahafa-po hita noho ny fanavotana nofinofy. No tia io alika loatra raha fantatrao fa saro-tahotra izy, satria izy dia ho tsy ampy socialized toy ny Puppy?
* Ho resy lahatra ny tenanao sy manantena ny fisalasalana eo amin'ny olona ianao hahazo ny alika avy.
Tsara mpiompy sy ny feon'ny fieritreretany sy ny famonjena ireo mpiasa fialofana ho Mitandrema ny faniriako ho an'ny alika, na dia hatramin'ny obnoxiousness. Ho izy manontany momba ny fandaharam-potoananao, tokontany, fefy, ankizy, amboa-hividy zava-nitranga ary tokony. Raha ny tena izy, raha tsy, raiso ho toy ny fampitandremana famantarana fa mety ho mitady ny alika eo amin'ny toerana ratsy. Maro dia maro ny olona mahalala kely ny alika rehefa mahazo iray na toy izany fa an-tapitrisany fanantenana tsy araka ny alika no nampijalina, niverina, na nandao isan-taona. Ny olona izay hizara azy ireo efa nahita betsaka, be loatra indraindray. Tsy tianao ny alika amin'ny olona te hanome na hivarotra anareo zavatra iray, nefa tsy misy mafy fanontaniana.
* Mamantatra ny tenanao.
Manome tsiny ny olona maro alika rehefa misy tsy fifanarahana, fa matetika izy ireo hadisoanay. Na dia nanao safidy moana (mitondra ny huskie ny condo ao Boca Raton), na dia tsy tena manana ny fotoana sy ny toetrany noho ny fampiofanana ny alika, na Niafina tany manonofinofy. Tena mety ho, ianao hahazo alika satria mila zavatra na te ho tia, na zavatra hafa ny fitiavana, na satria te hisolo ny zavatra tianao izay efa lasa. Tsy misy maha ratsy na ny tebiteby momba izay, fa tena tsy misy fanompoana alika hamoritra na mandà izany amin'ny manizingizina, “Nahazo ny alika ho an'ny ankizy” na “Nahazo azy fotsiny aho mba hitandrina ny mpangalatra izy.”
Ary ve izany faniriana ho tia dia mavesatra noho ny toetra hafa? Manam-paharetana ve ianao? Ve ianao manana fandeferana noho ny feo avo, korontana, sy ny fitabatabana? Madio loka ve ianao sy ny fanaka rugs? Na matory tara ny alahady? Hampahatezitra mora foana ve ianao? Fahazoana ny alika dia lehibe, lafo, manova ny fiainana-kevitra izay mahakasika anao nandritra ny taona maro.
* Ny alika tsy olombelona, tsarovy. Tsy mieritreritra ny olombelona teny na teny.
Tsy afaka milaza tantara, manaraka fitantarana, vakio ny saintsika (na dia manao mahatsapa ny moods). Tsy “ankizy amin'ny volony,” na ny ankizy mihitsy. Mety tia azy ireo ho faty, fa izany dia tsy midika hoe mitovy amintsika. Raha ny tena izy, alika tena tia azy ny tompony, satria ry zareo Tsy mba tahaka antsika. Mba handà azy ireo ny dogness dia disservice ho roa karazana. Mba adino fa izy ireo biby, tena amin'ny instinctual entin'ny faniriana ho an'ny tsirairay sy ny sakafo hafa, firaisana ara-nofo, sy fiahiana, dia ny manova ny zava-misy ny fomba aman-toetra, ary ny hampidi-doza azy ireo.
* Ny alika tsy pahaizana, na.
Ny fifandraisana amin'ny alika dia mety ho voakasika sy miendrika tamin'ny manokana ny tantaram-pianakaviana sy ny fihetseham-po lasa, fa ny alika ny fahaiza-manasitrana taloha voids fijaliana, na dia voafetra ihany hameno. Ny olona hilaza aminareo fa ny alika hahatakatra ny eritreriny sy ny mahafantatra ny zava-miafina lalina indrindra, fa tsy fanariam-pihetseham-po ny entana eo amin'ny biby. Raha mila fanampiana ianao zava-manahirana, lehibe na kely, azoko. Raha mahatakatra ny amboa anao mihoatra noho ny ny vady, manome ny alika ny taolana, dia mandehana mahita fanambadiana mpanolo-tsaina, na farafaharatsiny fifanakalozan-kevitra sasany amin'ny vadinao. Aza mangataka ny alika Hahatonga Anao ho Sambatra, na mitondra ny ketraka. Ny hevitry ny alika angamba Center ao amin'ny rehefa dia handeha ho any niala ny vody ka omeo hanina izy.
* Ny alika dia miha niseho ho sagacious prescient fanahy sy ny fanahy.
Ny hendry no foto-pisainana tsy mividy izany. Ny tsotra ny fifandraisanao ny alika, ny tsara kokoa, satria ny alika dia tsotra. Tiany fitsipika, mahazatra sy fahazavana, mpitarika, mahaliana fofona, alika hafa, ary, mazava ho azy, sakafo sy ny olona izay manome azy. Ny iray amin'ireo cornerstones ny misaina foto-pisainana: Ny alika adala momba anao, fa izy koa ho tia ny olon-kafa efa mitazona ny hamburger.
* Ny hevitra fototry ny fomba fijery ny fiainana miaraka amin'ny alika dia ny hoe tokony ho azo, malefaka, ary ny famoronana, mafy kokoa ny olona, ​​fa mora kokoa amin'ny alika.
Manantena be dia be ny tenanao eo amin'ny ny faharetana, Tapa-kevitra, ary tsy miovaova. Rehefa misy, ny alika dia nanaraka daholo ny ambiny. Miezaka ny tsy hieritreritra eo amin'ny ny “tsara” ary “ratsy” alika. Ireo no olombelona ny fiheverana fa tsy mihatra amin'ny biby. Misy, fa tsy, alika izay mahatakatra ny fomba fiaina eo amin'izao tontolo izao sy ny alika izay tsy. Tsindraindray, alika dia tena hoe mahery setra, novana fototarazo simba, na fomba ratsy mihoatra noho fanamboarana. Soa ihany, tsy fahita firy ry zareo.